भारतको अर्को ठूलो कुरा किन? - Shiv's Era
भारतको अर्को ठूलो कुरा किन?
मित्र र आफन्तहरूलाई दुलही र दुलहीलाई आशीर्वाद दिन अनुमति दिनुहोस्
परम्परागत भारतीय विवाह समारोहलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्नुहोस्
Metaverse एक सुरक्षित प्लेटफर्म हो जुन छेडछाड-प्रमाण हो
अतिथिहरूको लागि अन्तरक्रियात्मक अनुभव प्रदान गर्नुहोस्
फेसबुकको अभिभावक कम्पनी, मेटाले पहिलो भारतीय भर्चुअल विवाहको आयोजना गर्दछ
फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले सुरु गरेको ट्रेन्डमा अमेरिकाका एक जोडीले मेटाभर्स विवाहमा गाँठो बाँधेका छन् । अमेरिका पछि, भारत मेटाभर्स विवाहको आयोजना गर्ने दोस्रो देश बन्यो। तमिलनाडु दम्पती दिनेश एसपी र जनगानधिनी रामास्वामीले पूर्ण रूपमा भर्चुअल विवाहको आयोजना गरे।
Metaverse विवाह: पहिलो भर्चुअल विवाह जादुई छ
Metaverse विवाहले साथीहरू र आफन्तहरूलाई दुलहा र दुलहीलाई आशीर्वाद दिन अनुमति दिनेछ कि तिनीहरू वास्तविक जीवनमा समारोहमा उपस्थित हुन सकेनन्। तपाईले चाहानु भएको कुनै सीमाना बिना धेरै मानिसहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो बजेट-अनुकूल विवाह हुनेछ, विशेष गरी भारतीयहरूका लागि जसले सजावट र खानामा धेरै पैसा खर्च गर्छन्।
TardiVerse Metaverse मा एक झलक
Metaverse एक धेरै नयाँ अवधारणा हो र धेरै मानिसहरू यो शब्दसँग परिचित छैनन्। वेब विकास कम्पनीले भारतको पहिलो मेटाभर्स कम्पनी TardiVerse सुरु गर्‍यो, तिनीहरूले बहुभुज ब्लकचेनमा आधारित भारतको लागि मेटाभर्स निर्माण गरे।
यी भर्चुअल विवाह निमन्त्रणाहरू तपाईंले आज देख्नुहुनेछ सबैभन्दा प्यारा कुरा हो
यो भर्चुअल विवाहको हिस्सा बन्नको लागि, एक स्थिर इन्टरनेट जडान, ल्यापटप वा स्मार्टफोन, र वेब ब्राउजर चाहिन्छ। तपाईले MetaMask नामक लगइन पाउनुहुनेछ जुन व्यक्तिको नाम र पासवर्ड प्रयोग गरेर खोलिनेछ।
संसारको सबैभन्दा महँगो Metaverse विवाह लागत US$ 30K
अमेरिकी दम्पतीले आफ्नो मेटाभर्स विवाहमा US$ 30,000 खर्च गरे। कम अनुकूलन संग, लागत US $ 10,000 मा आउन सक्छ। भारतमा, metaverse विवाहहरूले तपाईंको धेरै पैसा बचत गर्न सक्छ।